ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: July 2008
တဲ.တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ.( florist ) Suhatono ဆိုတာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားအ
သောအားဖြင်. guest room တွေအတွက်ပန်းသီးနဲ.ပန်းတွေကိုလှည်းကလေးတစ်
lift ရှေ.မှာ၇ှိတဲ.ပစ္စည်းတွေတင်တဲ.စင်ပေါ်မှာတင်ထားတာအဲဒီ Suhartono နဲ.
တယ်။သူတို.စားနေတာက corn flake နဲ.ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ.မုန်.ကြွပ်မျိူးပါ။နှစ်
ယောက်သားခပ်သွက်သွက်အားပေးနေယင်း it's so nice ,what is the brand
ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်. ဒူဘိုင်းမြို.ရှိ Kempinski Hotel ,
Mall of The Emirates မှ မြန်မာနိုင်ငံနာဂစ်မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက်
ထောက်ပံ.ရေးအလှူငွေ 10,000 AED ( သိန်းသုံဆယ်၊ရှစ်သောင်း၊ခြောက်ထောင် )
ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမရှိလို.( စာရင်းထဲမှာပါတဲ.သူတိုင်း ) တစ်ယောက်ကို 500 AED
1000 AED ပေးတယ်လို.သိရတယ်။တစ်ချိူ.ဒီထက်ရတဲ.ဟိုတယ်ရှိသလိုလုံးဝမပေး
ကတော.စုံနေတာပဲ။အဲဒီလိုနဲ.သွားတဲ.သူတွေကကျွန်တော်တို.ဆီကို e-mail အရင်မပို.ပဲ
ရုံးကိုတန်းပြီး report တင်လိုက်ကြတယ်။ဒီတော.နောက်ကလိုက်ပြင်လို.မရတော.ဘူး
တစ်ယောက်မှပါမသွားဘူး၊ရှိတာမှ ၅ ယောက်တည်းပါ။တကယ်တော.ဒီလောက်ကြီးတဲ.
၀န်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ.ငွေပေးပြီးတာတောင် 10,000 AED ဒူဘိုင်းပိုက်ဆံကျန်ပါတယ်။
ဒါလည်းကျွန်တော.ကိုmanagement အသိပေးလို.သိရတာပါ။သူတို.ကအဲဒီပိုက်ဆံတစ်သောင်း
ပို.ခ kilo ဖိုးကလည်းဈေးကြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးအခက်အခဲကတော.ဒီကပို.ဖြစ်သည်.တိုင်
လို.ပြောလိုက်တယ်။မန်နေဂျာကသူတစ်ဦးထဲနဲ.မပြီး၊general manager နဲ.တွေ.ရဦးမယ်
အခုတော.အားလုံးအဆင်ပြေစွာပြီးဆုံးသွားလို.( သူတော်ကောင်းတွေ ) နတ်လူသာဓု
Posted by Unknown | at 11:49 PM |0comments
လွန်ခဲ.တဲ.တနင်္ဂနွေနေ.20th July 2008 မှာအလုပ်နားရက်နဲ.တိုက်ဆိုင်တာနဲ.
အစိုးရရဲ.ခွင်.ပြုချက်မရလို. Dubai ရဲ. Traders Hotel မှာတရားပွဲကျင်းပဖို.စီစဉ်ထား
တော.ဒူဘိုင်းရဲ.သတင်းစာ Gulf News ကသတင်းထောက်ကပါဆရာတော်ကိုလာ
ရောက် interview လုပ်နေလို.အနည်းငယ်ကူညီလိုက်ရပါသေးတယ်။ဆရာတော်ကတော.
ဖြစ်တဲ.သတင်းစာကြီးမှာကိုယ်ပေးချင်တဲ. first hand account message ကိုပီပြင်အောင်
တော.ဘန်ကောက်ကမြန်မာအများဆုံးနေတဲ.( တရားမ၀င်နေသူအများစုပါ ) မဟာချိူင်မှာ
အမကြီးတစ်ယောက်ကတော.မုန်တိုင်းအတွက်ငွေDhiram (U.A.E နိုင်ငံသုံးပိုက်ဆံ )
တဆက်တည်းနောက်နှစ်ရက်မြောက်မှာ gulf news သတင်းစာမှာပါလာတဲ.ဆရာ
Ashin Vayana, the Most Venerable from Shwe Twante Temple in Myanmar.
By Nina MuslimStaff Reporter
Published: July 23, 2008, 00:03
Dubai: More than 1.5 million villagers face starvation with few days left to plant rice in the wake of Cyclone Nargis, which devastated the reclusive state and destroyed crops, saidaleading Buddhist monk in Myanmar.
&amp;amp;amp;amp;amp;lt;font size="2" color="#000000" face="Verdana"&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;A href="http://gulfnews.advertserve.com/servlet/click/zone?zid=69&amp;amp;amp;amp;amp;amp;pid=0&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lookup=true&amp;amp;amp;amp;amp;amp;position=1" target="_top"&amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;lt;IMG src="http://gulfnews.advertserve.com/servlet/view/banner/image/zone?zid=69&amp;amp;amp;amp;amp;amp;pid=0&amp;amp;amp;amp;amp;amp;position=1" height="250" width="250" hspace="0" vspace="0" border="0" alt="Click Here!"&amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;lt;/A&amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;lt;/font&amp;amp;amp;amp;amp;gt;
Posted by Unknown | at 9:53 AM |0comments
myanmar cupid မှာဖတ်မိတဲ.ကဗျာလေးကရင်ထဲကိုထိစေခဲ.ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော.
ဟပ်ထားတဲ.ဒီကဗျာလေးကိုပဲဖတ်ကြည်.ပါဦး။ ထိုင်း၊မလေး၊စင်္ကာပူက ရွှေတွေရဲ.ဘ၀ကိုစာ
e,fcsJ hawGu ußGefjyKzdk hußGefawmfwdk hqDudkvmw,f/
ußGefcHzdk hußGefawmfwdk hudk,fwdkif c&D;xGuf&w,f/
vljzpfayr,fh a&G;cs,fcGifhu r&SdcJhbl; tar&,f/
ußGef&GmrSmrS oGm;&SmrdwJh tjzpf/
ao&if ajrMuD;qdkwmuawmh rSefygw,f/
&Sif&ifawmh rpdk hrydk haiGav;u ußGefawmfwdk htwGufa&TxD;aygh/
w&Gmajymif;ayr,fh olaumif;awmh rjzpfcJhygbl;/
ußGefawmf .. tareJ hnDrav;awGtwGuf &JcJhygw,f/
ußGefyJ jzpfaeao;w,f tar/
ußGefawmfh&J h &J&ifhrSKawGuyJ ae&mvGJcJhvdk hvm;/
udk,fhtcGifhta&;udk odzdk haeaeomom
wpfcsdK holi,fcsif;awGqdk udk,fh toufb,favmuf&SdrSef;awmif rod&Smbl;/
wcsdK huav;awGqdk jrefrm emrnfawmif r&Sd&Smbl;/
abm(hpf) qdkolawG ay;wJhemrnfawG yJ &SdMuw,f/
tarajymawmh tvkyfvkyf&if BuD;yGm;r,fqdk/
tvkyfvkyfav ydkcdkif;avavyJ tar/
ußGefjzpfavavyJ tar&J h/
olwdk hrSm r&Sdbl; tar/
aoG;pkyfzkd hyJ olwdk hodw,f/
cspfol&J hrsufESmokwfyk0gavmuf jzpfzdk hrSef;jyD;xGufcJhwmaygh/
tck jzpfvmwmu tm;vHk;&J hajcokwfykqdk;
r&Sdao;wJh tpG,fawmif usdK;cJhjyD/
jyefrpkyfcsifwJh o&ufaph wpfaphaygh/
udk,fhudk,fudk ußGefvdk hoHk;vdk h
olwdk ha'goav;wpfcsufxGuf&HkeJ h
&mbmcif;xJ &uf&ufpufpuf towfcH&Ekdifwmqdkawmh
olwdk htcspfawmf aMumifwpfaumifavmufawmif wefzdk; r&Sdbl;/
'gudk udk,fhudk,fudk ocifvdk h
tem&Sdwmudk vufcHrS aq;xnfhvkd h&rSmaygh tar/
jrefrm tcsif;csif; &dkif;yif;w,fqdk/
aumif;wJholawG vnf; trsm;MuD; &Sdygw,f/
wcsdK huawmh awmfawmfhudkqdk;w,f/
ußGefawmfwdk ha&Tvdk hhjcHKiHkac:aewJhtxJu wpfcsdK huyJ
tcsif;csif; a&mif;pm;aeMuwm tar/
bmyJjzpfjzpf olwdk hvlpdwfr&Sdwm uawmh
tukefvHk;eJ hawmhrwefbl; tar/
olwdk hudk a&Tpm&if;xJu ußGefawmfxkwfw,f/
[dkwavmu pmtkyfxJrSm zwfvdkuf&w,ftar/
vifuGef;qdkwJh olu ußGefpepf yaysmufatmifvkyfay;cJhowJh/
b,frSm [kwfvdk hvJ tar&,f/
olvkyfEdkifcJhwm ol hEdkifiHuGufuGufav;yJ
ußGefawmfwdk htwGufawmh olu
vl htjzpfu &cJw,fqdk/
&cJ wmyJ aumif;ygw,f tar/
ußGeffffffawmf iSufawGudk ai;Munfhrdw,f tar/
iSuftcsif;csif; trsdK;tEG,frwlvdk h&ufpufMuwmr&Sdbl;tar/
iSufawGrSm bmoma&; t"du&kPf;awG r&Sdbl;/
iSufawGrSm udk,fhtodkuftjrHKudk AdkvfusjyD; twif;a&T hckdif;wmrsdK; r&Sdbl;/
iSufawG uHqdk;rdk;arSmifusjyD; avSmiftdrfxJrSm ae&&ifawmif
olwdk hocifu olwdk hudk tcspfeJ havSmifxm;wm/
ußGefawmfwdk huawmh trkef;eJ havSmifxm;jcif;cH&w,f/
arwåm t&rf;iwfw,f tar&,f/
ußGefawmfwdk hidkoHawG b,favmufus,fus,f
trsdK;om; tusdK;pD;yGm;qdkwJh pum;vHk;atmufrSm
em;rMum;Mubl; xifyg&J h/
vl htcGifhta&;qdkwJh yef;[m
zdESdyfolawG&J hESKwfcrf;rSm ryGifhbl; tar/
Posted by Unknown | at 12:13 AM |0comments
Labels: ကဗျာ။ရေးသူ ကောင်းကင်ကို
ဒီနေ.ခေတ်မှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကစပြီးအခုအထိတစ်နိုင်ငံလုံးအုံးအုံးကြွက်ကြွက်ပြောနေ
ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်အား အကောင်းဆုံးအစိုးရစနစ်လို့ လူတွေလက်ခံထားကြ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းမှာ တစ်ပါတီစနစ်နိုင်ငံတွေ၊ စစ်အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေ စသည် စသည်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးခဲ့ကြတာပါ။ လေ့လာသူ များကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၉၀ ကျော်ရဲ့ ၆၀ % ဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ Community of Democracy အဖွဲ့ကတော့ နိုင်ငံပေါင်းတစ်ရာကျော်ဟာ ဒီမိုကရေစီပုံစံကို ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားဖို့ပေါ်လာတာက ဒီမိုကရေစီ စစ်တယ် မစစ်ဘူးဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ ဒီအချက်ကို ဘာစံတွေနဲ့ တိုင်းမှာလဲဆိုတာ ပညာရှင်အများအမြဲတမ်း ကြံဆခဲ့ကြတာပါ။ တစ်ချို့ကတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပြည့်စုံသင့်တဲ့အချက်များကို (ဥပမာ။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် စသည်ဖြင့်) တစ်ကနေ တစ်ဆယ်အထိ အမှတ်ပေးတဲ့ စနစ်နဲ့လဲ အကဲဖြတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ပါတီများရဲ့အခြေအနေ၊ မဲပေးမှုအခြေအနေစတာတွေနဲ့ အကဲဖြတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ကြတော့လဲ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တိုင်းတာကြပါတယ်။ ဒီလိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာ ပြဿနာက နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အခြေအနေမတူတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ IDEA အဖွဲ့ကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အကဲဖြတ်ရာမှာ အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမယ် လို့ ဆိုပါတယ်-
တစ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပေါ်ပေါက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။ အချိန်ယူရမယ်။ စိတ်ရှည် သည်းခံရမယ်။
နှစ်။ ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို အကောင်အထည်ဖော်လို့ မရဘူး။
သုံး။ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များဟာ နှိုင်းယှဉ်ကျင့်သုံးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးဖော်နည်းအတိကျမရှိဘူး။
လေး။ ဒီမိုကရေစီကို သက်ဆိုင်ရာလူ့ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကနေ စတင်တည်ဆောက်ရမယ်။
ငါး။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာ ပို့ကုန်လဲမဟုတ်ဘူး၊ သွင်းကုန်လဲမဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက် ပြင်ပက အထောက် အကူပေးတာပဲလုပ်နိုင်တယ်။
ဒီအယူအဆကနေ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ဒီမိုကရေစီကျ၊ မကျ၊ ဆန်းစစ်တဲ့အလုပ်ကို အဲဒီ နိုင်ငံသားတွေကပဲဆုံးဖြတ်ရမယ်၊ အဲဒီပြည်သူပြည်သားတွေကပဲ သူ့နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အစဉ်အလာများကို နားလည်တယ်။ ဒီအချက်တွေက သူတို့နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာ သူတို့ပဲနားလည်တယ်လို့ လက်ခံသူတွေလဲရှိပါတယ်။ ဥပမာ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ ရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ဟာ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီစံများနဲ့ ကွဲပြားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားများကတော့ သူတို့စနစ်ကို သူတို့ကြိုက်တာပဲ။ ဒီစနစ်ဟာ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ သူတို့ပါဝင်နိုင်ခွင့်ပေးသလို နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ကြွယ်ဝမှုကို ပေးတယ်လို့ သူတို့ လက်ခံထားတာကိုး။ ဒါ့ကြောင့်လဲ အချို့နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာရှင်များက လစ်ဘရယ်မဆန်တဲ့ဒီမိုကရေစီ Illiberal Democracy ဆိုတဲ့ စကားကို တီထွင်သုံး လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ ဒီမိုကရေစီကျမကျ ဆန်းစစ်ရာမှာ အခြေခံရမယ့် မှတ်ကျောက်များလဲရှိပါ သေးတယ်။ ဒီမှတ်ကျောက်တွေကတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အခြေခံအင်္ဂါရပ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ မူဝါဒဆိုင်ရာချမှတ် သူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ပြည်သူလူထုရဲ့ ထိန်းကျောင်းနိုင်မှုနဲ့ မူဝါဒချမှတ်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း တန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အချက်နှစ်ခုကနေ ဆွဲထုတ်ထားတာပါ။ အဲဒီမှတ်ကျောက်က တော့ ကိုးချက်ရှိပါတယ်။
တစ်။ ပြည်သူများရဲ့ မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်။
နှစ်။ ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု
သုံး။ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ လိင်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ နိုင်ငံရေးစနစ်တွင် ကိုယ်စားပြုပါဝင်နိုင်ခွင့်။
လေး။ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်တာဝန်ခံမှုရှိခြင်း။
ခြောက်။ ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြနိုင်သည့် စနစ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းရှိခြင်း၊ ထိုဆန္ဒများကို နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများက တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှု ရှိခြင်း။
ခုနှစ်။ နိုင်ငံသားများရဲ့ အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များ။ ( လူ့အခွင့်အရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအခွင့်အရေး စသည်ဖြင့်)
ရှစ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု Rule of Law
ဒီတော့ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများက မိမိတို့ နိုင်ငံရေး စနစ်ကို အထက်ပါမှတ်ကျောက်များနဲ့ တိုင်းတာအကဲဖြတ်ဖို့ပါဘဲ။ ဒီနေရာမှ သတိပြုဖို့က ဒီလိုအကဲဖြတ်တဲ့အခါ အပြင်က သတ်မှတ်ပေးတဲ့ အောင်မှတ်လဲမရှိပါဘူး၊ ဘယ်နိုင်ငံက စံကိုမှီမှဆိုတဲ့ စံကိုမှီမှရယ်လို့လဲ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူအများစုရဲ့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုက တိုင်းတာရမယ့် စံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ သတင်းစာများဟာ အနောက်နိုင်ငံများမှာလိုရေးတာ၊ ဓာတ်ပုံတွေဖော်ပြရာမှာ လွတ်လပ်မှုရှိခြင်မှ ရှိမယ်။ သို့သော် သက်ဆိုင်ရာပြည်သူများက အခုရနေတဲ့ အခွင့်အရေးဟာ သူတို့ရဲ့ အမြင်ကိုဖော်ပြဖို့ လုံလောက်တယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာပြည်သူများလိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစံဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဒီအကဲဖြတ်ချက်ဟာ အခြားလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး စံများဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချနိုင်တာတို့၊ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတို့နဲ့လဲ ဆက်စပ်အကဲဖြတ်ရမယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။
အားလုံးပြန်ချုပ်ရင်တော့ ဒီအယူအဆကိုတင်ပြသူတွေက ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာ ဘာစံတွေ ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာ သချာင်္နည်းနဲ့ တိတိကျကျ သတ်မှတ်လို့ မရဘူး၊ ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူတွေအပေါ်မှာ သက်ဆိုင်ရာကာယကံရှင်တွေရဲ့ ကျေနပ်လက်ခံမှုနဲ့ပဲ တိုင်းတာရမယ်။ နိုင်ငံရေးသက်သက်နဲ့မဟုတ် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးစတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင်းချင်းရာတွေနဲ့လဲ ဆက်စပ်အကဲဖြတ်ရ မယ် လို့ ဆိုလိုတာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကလဲ ဒီမိုကရေစီဆိုတာပဲပြောနေကြ၊ ဒီမိုကရေစီကျတယ်။ မကျဘူး ငြင်းနေကြတော့ ဒီအယူအဆလေးဟာလဲ ထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီမှ၊ ဟိုနိုင်ငံပုံစံနဲ့တူမှ ရယ်လို့ တရားသေ စွဲမှတ်ထားသူများကတော့ လက်ခံနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Food for Thought တွေးစရာ တစ်ခု အနေနဲ့ ဝေမျှလိုက်တာပါ။
Posted by Unknown | at 1:44 AM |0comments
Education and Developement
Posted by Unknown | at 1:41 AM |0comments
ထည်.သွင်းစဉ်းစားရမယ်.အကြောင်းတွေကို scholar တစ်ယောက်ပီသစွာလေ.
Posted by Unknown | at 1:35 AM |0comments
တခါက အင်မတန် သာယာလှပတဲ့ ခြုံဖုတ်စားကျက်ခင်းကြီးတခုမှာ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ စုပေါင်းနေထိုင်ကြ တယ်။ တနေ့တော့ ကျားဆိုးကြီး ရောက်လာတယ်။ တောကောင်လေးတွေအပေါ် ဗိုလ်ကျနေတယ်။ နေ့စဉ် သတ်ဖြတ် စားသောက်နေတဲ့အတွက် တိရိစ္ဆာန်လေးတွေဟာ အတော့်ကို ဒုက္ခရောက်နေကြသတဲ့။ ကျားဆိုး ကြီး နှိပ်စက်ထားတဲ့အတွက် တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ သားတကွဲ မယားတကွဲဖြစ်ကြ၊ ဒုက္ခိတတွေ ဖြစ်ကြပေါ့။
ဒီတော့ သူတို့ဟာ ကျားဆိုးကြီးကို ခုခံတော်လှန်ကြသတဲ့။ ဘယ်လိုမှ မအောင်မြင်နိုင် ဖြစ်နေကြတယ်။ ကျားဆိုးကြီးကို နှိမ်နင်းတဲ့နေရာမှာ တကွဲတပြားစီ ဖြစ်နေလို့မရဘူး။ စုပေါင်းမှ ရမယ်ဆိုတာကို သူတို့လက် ခံထားတဲ့အတွက် ပြည်ထောင်စုခြုံဖုတ် အမျိုးသားကောင်စီ National Council of Union of Bush ၊ အတို ကောက် NCUB ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ကျားဆိုးကြီးကို တအိအိနဲ့ တော်လှန်နေခဲ့ကြတာ အချိန်အတော်ကြာသွား ပြီဆိုပဲ။
သူတို့က တောထဲက ဆူပါပါဝါ တိရစ္ဆာန်ကြီးတွေ ထောက်ခံမှုရအောင် လော်ဘီလုပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုပြီး အစိုးရတခုကိုလည်း ဖွဲ့လိုက်သေးတယ်။ ဒီအစိုးရကိုတော့ National Coalition Government of Union of Bush – NCGUB လို့ ခေါ်ကြသတဲ့။ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဒေါက်တာဖွတ်ကြားက ဦးဆောင်တယ်။ ဖွတ်ကြားကို အစိုးရအဖွဲ့မှာ ဝန်ကြီးချုပ် တင်ထားရတာကတော့ ကြားနဲ့ ကျားက အသံတူတယ်။ ဒီတော့ သူက ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သင့်တယ်လို့ တိရစ္ဆာန်တွေက ယူဆကြတယ်။ သူက အေးတယ်၊ စကားနည်းတယ်၊ ပြဿနာ မရှိနိင်ဘူးထင်ပြီး တိရစ္ဆာန်လေးတွေက တင်ထားလိုက်တယ်။ သူဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ကလည်း ကျားကိုခြောက်ဖို့ စက္ကူကျားရုပ်ကြီး တခုကိုလုပ်ပြီး ကျားယောင်ဆောင်ရတဲ့ တာဝန်တဲ့။ ဒါပေမယ့် သူက အရမ်းပျင်းပြီး အမြဲတမ်းခွေနေတဲ့အတွက် သူ့ကျားရုပ်ကြီးကို ဘယ်သူမှ ရှိတယ်လို့တောင် မထင်ကြတော့ဘူး။ တခါကဆို သူ့ကျားရုပ်ကြီးကို ကျားဆိုးကြီးက သေးနဲ့တောင် ပန်းသွားသေးရဲ့။
ဒါကြောင့် ကျားဆိုးကြီးကို ထိထိရောက်ရောက် နှိမ်နင်းမဲ့သူ မရှိတော့တဲ့အတွက် အခြေအနေက အတော့်ကို ဆိုးဝါးလာတာပေါ့။ တနေ့တော့ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် ကိုတောနွား ဦးဆောင်ပြီး အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်လိုက်ကြသတဲ့။
"ညီအကိုတော်တို့၊ ငါတို့ ဒီအတိုင်းနေလို့တော့ မဖြစ်တော့ဘူး။ တို့တိရိစ္ဆာန်တွေ မျိုးတုံးတော့မယ်။ ဒီတော့ ငါ့မှာ အကြံတခုရှိတယ်။ ငါတို့က အားနည်းသတ္တဝါတွေ ဖြစ်လို့သာ ခွေးမသား ကျားဆိုးကြီးက ငါတို့ကို နှိပ်စက်နေတာ။ ငါတို့သာ ကျားဆိုရင် သူ ဒီလိုနှိပ်စက်နိုင်ပါ့မလား။"
တောနွားက စကားကို ခဏဖြတ်ထားလိုက်တယ်။ တောသတ္တဝါလေးတွေဟာ တောနွားရဲ့လေကို မိသွားကြတယ်၊ ငြိမ်သက်သွားကြတယ်။ တောနွားက ဆက်ပြီး "ငါတို့ဟာ နွားမဟုတ်၊ လိပ်မဟုတ်၊ တကယ့်ကျားဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။"
"တကယ့်ကျားဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်" ဆိုတဲ့စကားကို တောနွားက သုံးခါတိတိ ဆက်တိုက် ပြောလိုက်တဲ့အတွက် နားထောင်နေတဲ့ တောကောင်လေးတွေက ကြက်သီးတွေ ဘာတွေ ထသွားသတဲ့။ ခွေးအ တကောင်ဆိုရင် တောနွားရဲ့ စက္ကူကျားစီမံကိန်းသာ အောင်မြင်ရင် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ခုတ်နိုင်မယ်၊ ဒါဆိုရင် အရိုးအရင်း စားရနိုင်တယ်လို့ ယူဆပြီး အူချင်သလို ဖြစ်လာတယ်။
တိရိစ္ဆာန်လေးတွေက "ဒီတော့ ဘာဆက်လုပ်မလဲ ဆရာကြီး" လို့ မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ တောနွားက "ငါ့မှာ အကြံရှိတယ်။ ငါတို့ ကျားဆိုးကြီးထက်ကြီးတဲ့ စက္ကူကျားရုပ်တခု လုပ်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကျားက တကယ့်ကျားအတိုင်း ဖြစ်ရမယ်။ ကျားရဲ့ သဘာဝက သူ့ထက်မိုက်တဲ့ ကျားတကောင်ပေါ်လာရင် အမြီးကုတ် ထွက်ပြေးစမြဲပဲ။"
ဒါပေမယ့် ယုန်လေးတကောင်က "ကိုနွားကြီး၊ အရင်ကလည်း ကျနော်တို့ ကျားရုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကျားရုပ်တွေ များလာတာပဲ အဖတ်တင်တယ်ဗျ။ ၁၉၈၈ တုန်းက ဦးခရု စင်ပြိုင်ကျားရုပ်တခု၊ နောက်တော့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိင်ရတဲ့ လိပ်တွေနဲ့ ဖွတ်ကြီးဦးဆောင်ပြီး ကျားရုပ်တခု လုပ်ခဲ့သေးတယ်။ ကျားဆိုးကတောင် သေးနဲ့ပန်းသွား သေးတယ် မဟုတ်လား။"
မြက်စားနေတဲ့ တောင်ဆိတ်တကောင်ကလည်း "ဒရယ်တွေက ကျားဆိုးကြီး နှိပ်စက်နေတာ ဒီစားကျက်ကြီး ထဲမှာနေလို့ ဖြစ်ရတယ်လို့ ယူဆပြီး တလောကပဲ သီးခြားစားကျက်ခင်း နိုင်ငံတော်ဆိုပြီး ကြေညာတယ်။ ကျားရုပ်ကြီးတခုကို သူတို့လုပ်သေးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် မထိရောက်ဘူး။ သူတို့ကျားအရုပ်က မိုးတွေရွာလိုက်လို့ ရေထဲမှာ ပျော်သွားတယ်ဗျ။"
ဖြူကောင်ကလည်း "ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ သူတို့က ကျားရုပ်တွေလုပ်ပြီး ကျားခြောက်ကြတော့ ကျုပ်တို့ကလည်း ကျားနဲ့ တူအောင်ဆိုပြီး ရိုသေပြ၊ အမြီးကုတ်ပြရတာပဲ။ ကျားဆိုးကိုလည်း ကြောက်ရ၊ ကျားတုကိုလည်း ရိုသေပြရ၊ အလုပ်က မတွင်လှဘူးဗျ။ ကျားရုပ်တခုတော့ ထပ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့" လို့ ငိုမဲ့မဲ့ အသံနဲ့ တောင်းပန်တယ်။
ယုန်လေး၊ တောင်ဆိတ်နဲ့ ဖြူတို့က အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ ဗိုလ်ပုံအလယ်မှာ ထောက်လိုက်တော့ တောနွားကြီးက ရှူးဆို ဒေါသထွက်သွားတယ်။ နှာခေါင်းက လေတွေကို ရှူးဆို တချက်မှုတ်လိုက်ရင်း "မင်းတို့ ပါးစပ်ပိတ် ထားစမ်း၊ ခွေးမသားတွေ။ ဘာနားလည်လို့လဲ။ ငါ့ကျားရုပ်စီမံကိန်းကို မကြိုက်ရင် မင်းမှာ ဘာအကြံရှိလဲ။ ကဲ၊ ခုပြော" လို့ တောနွားကဆိုတော့ ယုန်လည်း ပါးစပ်ပိတ်သွားတယ်။ တောင်ဆိတ်လည်း ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်ပဲ လုပ်နိုင်တော့တယ်။ ဖြူက ကိုယ်ကို လုံးလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် တောနွားရဲ့ ကျားရုပ်စီမံကိန်းကို ဒေါက်တာဖွတ်ကြားကလည်း အပြင်းအထန် ထပြီး ကန့်ကွက်တယ်။
"ဒီကိစ္စ ကျုပ်သဘောမတူနိုင်ဘူး။ ဒီမှာ ကိုတောနွား၊ ခြုံဖုတ်တခုတည်းမှာ ကြက်ဖနှစ်ကောင် မအောင်းသင့်ဘူး။ ကျားရုပ်တရုပ် ရှိပြီးသားကို နောက်ထပ်ကျားရုပ် ထပ်လုပ်တာ မဖြစ်သင့်ဘူး။"
သူကန့်ကွက်ရတဲ့ အကြောင်းက ကျားယောင်ဆောင်ထားရတဲ့ အရသာကို သူ သဘောခွေ့နေလို့ ဖြစ်တယ်။ ကျားဆိုးကြီးက ဖွတ်ကြား ကျားရုပ်ကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ တောကောင်ငယ်လေးတွေကလည်း ဖွတ်ကြားကိုတွေ့ရင် အားနာပါနာနဲ့ "မစ္စတာ ကျားရုပ်ကြီးခင်ဗျား" လို့ အခေါ်ခံရတာကိုပဲ သူက သိပ်ကို သာယာနေတာကိုး။ ကျားသေးပန်း သွားတဲ့အတွက် ကျားသေးစော် နံနေတာကို သူ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့ ကျားနံ့လို့ထင်ပြီး ပြုံးပြုံးနဲ့ ကျေနပ်နေသတဲ့။
ငယ်သူငယ်ချင်းတွေက ကိုဖွတ်ကြားလို့ တရင်းတနှီး ခေါ်ရင်တောင် သူက မကြိုက်ချင်တော့ဘူး။ ဖွတ်ကျား (ယပင့်နဲ့ ကျားထားတယ်) လို့ ခေါ်တဲ့သူကို သူက နေရာပေးတယ်။ သူ့ကျားရုပ်ကို ဖျက်ပြီး တောနွားက ကျားရုပ်အသစ်တခု လုပ်လာမှာကို စိုးရိမ်လာတယ်။
တောနွားက မျက်ဆန်ကြီး နီလာပြီး ဖွတ်ကြားကို စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ "ယူနိုးဟွိုင်း You know why?" (ဘာကြောင့်လဲ သိလား) လို့ ပြန်မေးတယ်။ သူ့အမေးကို သူ့ဖာသာ ဖြေလိုက်တယ်။ "ခင်ဗျားတို့ လုပ်ထားတဲ့ ကျားရုပ်တွေက ကျားနဲ့ မတူလို့ဗျ" လို့ ပြန်ဟောက်လိုက်တယ်။ ဆက်ပြီး "ငါလုပ်ပြမယ်။ တကယ်ကျားနဲ့ တူတဲ့ ကျားရုပ်။"
ဒါနဲ့ ဖွတ်ကြားလည်း ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
တိရစ္ဆာန်လေးတွေက နောက်ထပ်ကျားရုပ်တခု ထပ်လုပ်ရမှာကို ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေကြတယ်။ ကျားရုပ်တွေများပြီး တခုမှ အလုပ်မဖြစ်တာကို သိနေတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ မရသေးလို့ အစည်းဝေးကို ခဏနားလိုက်တယ်။ သူများနားနေတဲ့ အချိန်မှာ တောနွားက မနားဘူး။ ကျန်တဲ့ တောသတ္တဝါလေးတွေကို လိုက်စည်းရုံးတော့သတဲ့။ သူ ကျားရုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ကျားရေခြုံဖို့ အလှည့်ကျ တာဝန်ပေးမယ်ဆိုပြီး လက်သိပ်ထိုး စည်းရုံးတော့တယ်။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကလည်း ကျားရူးရူးနေတဲ့ကောင်တွေ ချည်းပဲဆိုတော့ ကျားရုပ်တခု ထပ်လုပ်မယ် ဆိုတာကို သဘောခွေ့နေကြသတဲ့။ တချို့ကောင်တွေဆိုရင် နောင်ဘဝမှာ ကျားဖြစ်ရပါစေလို့ တောထဲက ရသေ့ထံမှာ ဆုတောင်းကြတယ်။
တောနွားက သဘာပတိ တောဝက်ကြီးကို ကျားရေခြုံရမယ်လို့ မဲဆွယ်ထားတယ်။ "ဥက္ကဌကြီးခင်ဗျား၊ ခင်ဗျားနဲ့ ကျားရေလေးနဲ့ သိပ်လိုက်တာပဲ။ ကြက်သရေရှိတယ်။ ဒါမှ တခြားတိရစ္ဆာန်လေးတွေက ခင်ဗျားကို လေးစားမယ်"လို့ ပင့်ထားတယ်။ သဘာပတိကြီးလည်း အတော့ကို ပီတိဖြစ်တယ်။ ဒေါက်တာကိုရွှေလိပ်ဆိုရင် ကျားဖြစ်ချင်နေတာ ကြာပြီ။ ဖွတ်ကြားက သူ့ကို ချောင်ထိုးထားတယ်လို့ ခံစားနေရတယ်။ ဒါကိုသိတဲ့ တောနွားက "ခင်ဗျားလို အရည်အချင်းရှိတဲ့ လိပ်တကောင်ကို ဖွတ်ကြားက ကျားယောင်ဆောင်ဖို့ တာဝန်မပေးတာ ခင်ဗျားအတွက် ကျုပ်ရင်နာ တယ်" လို့ နှဲ့တယ်။ နှစ်ကိုယ်ကြားလေသံနဲ့ တောနွားက "ဒီမှာ ကိုလိပ်၊ ခင်ဗျား ကျားရေခြုံရစေမယ်။ ခင်ဗျား ကျုပ်ကို ထောက်ခံပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျားဆိုးကြီးက ဆိုးလွန်းလို့ပါ။ ကျုပ်လုပ်နေတာ ခင်ဗျားတို့ အတွက်ပါ" လို့ ပူပုံပန်းလှည့်ပြောတယ်။
သူက အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူမိန်းမ မရွှေလိပ်ပုကို ကြွားတယ်။ "မိန်းမရေ၊ ကိုတောနွားကြီးကလည်း ခက်တာပဲကွာ။ ခင်ဗျားအခွံက မာတယ်၊ သန်တယ်၊ ခင်ဗျား ကျားလုပ်မှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ ကိုယ့်ကို မေတ္တာရပ်ခံနေတယ်။ မင်း ဘယ်လိုသဘောထားလဲ။"
မရွှေလိပ်ပုကလည်း "ဟုတ်လား၊ ဒါလင်။ ကျားဖြစ်ရင်တော့ ခင်လည်း ကျားမယား ဖြစ်ရပြီပေါ့။ ကိုယ့်ဖက် ကိုယ်ယက်နိုင်ပြီ" ဆိုပြီး အားရဝမ်းသာ ထောက်ခံလိုက်သတဲ့။
ပုတ်သင်ညိုကိုလည်း တောနွားက "အသင် ပုတ်သင်ညို၊ သင်က အရောင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတယ်။ ဘယ်သူမှ သင့်လို အရောင်ပြောင်းနိုင်စွမ်း မရှိဘူး။ ကျားအရောင်တိုင်း သင်ပြောင်းနိုင်မယ်လို့ ငါယုံကြည်တယ်။" သူက ဆက်ပြီး "သင့်ရဲ့မူရင်းအရောင်ကိုတောင် ကျုပ်မမှတ်တော့ဘူး" လို့မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ပုတ်သင်ညိုဟာ သဘောအကျကြီး ကျနေတယ်။ ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ "ကျုပ်သဘောတူတယ်။ ကျုပ်သဘောတူတယ်" ဖြစ်သွားတာပေါ့။
တောနွားက တောကြောင်နဲ့ ချောင်းစပ်မှာတွေ့တယ်။ ပဋိသန္တာရစကားဆိုရင်း "နီတိဆရာတွေရဲ့အဆိုအရ ကျားဆရာက ကြောင်ကိုးဗျ။ အကြောင်းမညီညွတ်လို့ တညောင်ညောင်အော်နေရတာကို ကျနော် နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တတောလုံး ပြေးကြည့်လို့မှ ကျားနဲ့တူတဲ့ အကောင်ကို ပြပါဆိုရင် ဘယ်မလဲ၊ ဘယ်သူကိုပြမလဲ။ ကိုရင်တော ကြောင်ကိုပဲ ပြရမှာပဲ။ ဒါကတော့ ကိုယ်လူကိုယ် တင်တယ်လို့ စွပ်စွဲလည်း ခံရမှာပဲ၊ ဟုတ်တာကိုဗျ။ ကျုပ်ရဲ့ မဟာစက္ကူကျား စီမံကိန်းမှာ ကျားသံလို အော်နိုင်တာ ကိုကြီးတောကြောင်ပဲ ရှိတာပဲ။ ဒီတာဝန်ကို ရဲရဲယူစမ်းပါ" လို့ မြှောက်ပင့်လိုက်တယ်။
ကျားသံနဲ့ တူတယ်လို့ မြှောက်လိုက်တဲ့အတွက် တောကြောင်ကလည်း သဘောခွေ့သွားတယ်။ "ခင်ဗျားတို့ တာဝန်ပေးတယ် ဆိုရင်တော့ အများကောင်းစားရေးအတွက်ပဲ ယူပါတယ်ဗျာ" ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ အစည်းဝေး ပြန်စကြတယ်။ တောနွားက လိပ်နဲ့ ပုတ်သင်နဲ့ တောကြောင်ကို စည်းရုံးထားတဲ့အတွက် မဟာကျားရုပ် စီမံကိန်းကို အများစုက ထောက်ခံမဲ ရသွားတယ်။ သဘာပတိ တောဝက်ကြီးက ကျားရုပ်တခု လုပ်စေလို့ အတည်ပြုလိုက်တယ်။
ကျားရုပ်ကိုလုပ်ဖို့ တောနွားကိုပဲ တာဝန်ပေးလိုက်တယ်။ တောနွားလည်း ကျားရုပ်လုပ်တတ်တဲ့ လူတယောက်ကို ဘုရားပွဲဈေးက ရှာလာတယ်။ ဒီလူက ကျားရုပ်ကြီးကို လက်ခယူပြီး လုပ်ပေးလိုက်သတဲ့။
တောနွားလည်း ကျားရုပ်ကြီးကိုသယ်ပြီး စာကျက်ခင်းကြီးထဲကို ပြန်လာတယ်။ သူလုပ်လာတဲ့ ကျားရုပ်ကြီးကို တိရစ္ဆာန်လေးတွေရှေ့မှာ ပြလိုက်တယ်။ တိရစ္ဆာန်လောကတခုလုံး …
ဆိုတဲ့ အာမေဋိတ်သံတွေလွမ်းသွားသတဲ့။ ကျားက တကယ်တူတယ်။ တချို့ဆိုရင် ထွက်ပြေးကြတယ်။ ကန့်ကွက်မိတဲ့ ယုန်က ထခုန်တယ်။ ဖွတ်ကြားက ယောင်ပြီး ခွေမိတယ်။
သဘာပတိ တောဝက်ကြီးက "ကျားအစစ်ထက်တောင် ကျားနဲ့တူတယ်" လို့ ချီးမွမ်းတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကို ကြည့်ပီး တောနွားကြီးက ပီတိဖြစ်နေသတဲ့။ တော်လှန်ရေးအောင်ပြီလို့ "ဖွတ်အဲ" လို့ တချက်တွန်လိုက်သတဲ့။ တောနွားကြီးက "ကဲ၊ ရဲဘော်တို့၊ မကြောက်ကြပါနဲ့။ ဒါက စက္ကူကျားပါ၊ ကျုပ် လုပ်ထားတာပါ။"
"ဟဲ့ကောင်၊ ဟိန်းဟောက်လိုက်စမ်း" လို့ အမိန့်ပေးပြလိုက်တယ်။ ကျားရုပ်ထဲမှာဝင်နေတဲ့ တောကြောင်က စပီကာကနေ ကျားသံလို တချက်ဟိန်းလိုက်တယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေ အကုန်လုံး အမြီးမလှုပ်၊ နားရွက် မကုတ်ရဲဘူး ဖြစ်သွားတယ်၊ ငြိမ်ကျသွားတယ်။ ဉာဏ်မရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေက တောနွားကြီးကို လှိမ့်အထင်ကြီးသွားကြတော့ တာပေါ့။
"ကဲ၊ ရဲဘော်တို့၊ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ပါ။ ကျားဆိုးကြီးကို နှိမ်နင်းတဲ့ တာဝန်ကို ကျုပ်ယူလိုက်ပြီ။ ကျုပ်ရယ်၊ ကိုလိပ်ရယ်၊ တောကြောင်ရယ်၊ ကျားရုပ်ထဲမှာ ဝင်ပြီး ကျားယောင်ဆောင်ပေးနေပါမယ်။ ကျားဆိုးကြီးကို ပြန်ချမယ်။"
တိရစ္ဆာန်လေးတွေလည်း ပြန်သွားကြတော့တယ်။ တောနွားတို့ အဖွဲ့လည်း ကျားရုပ်ကြီးထဲဝင်ပြီး စားကျက် အလယ်ကောင်မှာ ကျားဆိုးကြီး အလာကို စောင့်နေကြတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ကျားဆိုးကြီးက ဗိုက်ဆာလာတဲ့အတွက် တောလည်ဖို့အတွက် စားကျက်လွင်ပြင်ထဲကို ရောက်လာတယ်။ စားကျက်ထဲက အရုပ်ကျားကို တွေ့သွားတယ်။ ရုတ်တရက် လန့်သွားသတဲ့။ ကျားနဲ့ သိပ်တူနေတာကိုး။ ကျားကြီးက အနီးနားကို မသိမသာနဲ့ ကပ်သွားတော့၊ ကျားရုပ်ကြီးထဲက တောနွား၊ လိပ်နဲ့ တောကြောင်တို့ဟာ ကျားသံမျိုးစုံ လုပ်ကြတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကျားဆိုးကြီးက မပြေးဘဲ ရစ်သီရစ်သီ လုပ်နေသတဲ့။ ကျားမလို့ ထင်နေတယ်။ ဖီလင်တွေ တက်လာသတဲ့။ နောက်တော့ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ကျားဆိုးကြီးက ကျားရုပ်ကြီးပေါ် ခုန်တက်လိုက်ပြီး အချစ်နလန်ထတော့တာပဲ။
တောနွား၊ လိပ်နဲ့ တောကြောင်တို့လည်း သံပြိုင်အော်ကြတယ်။ သူတို့အော်လေ ကျားဆိုးကြီးက ဖီလင်တက်လေပဲတဲ့။
ကျားဆိုးကြီးကလည်း ဖွန်မကြောင်ရတာကြာတော့ အမေရိကန် အာကာသယာဉ်မှူးမ လီဆာနိုးဝပ်လို စိတ်တွေ ထခင်ျတိုင်း ထနေတော့တာပေါ့။
"ခင်ကလည်းကွာ၊ ကိုကိုကျားက အတည်ယူမှာပါ" လို့ ပတ်ချွဲနှပ်ချွဲ လုပ်လိုလုပ်၊ "ကောင်မ၊ သေနာမ၊ ငါလုပ်လိုက်ရ" ပုဏ္ဏက တိုက်လိုတိုက်၊ "ကိုကိုကျားတော့ ညီမကို စွဲပြီကွာ" လို့ ပလီစိခြောက်ချက် ဆိုလိုဆို၊ "မသာမ၊ နင် ငါ့အလို မလိုက်ရင်တော့ ဂုတ်ကိုခဲပြီး ခြေခွင်ရိုက်လှဲလိုက်မှာနော်" ပြောပြီး ဖနောင့်နဲ့ ပေါက်လိုပေါက်။ ဒီလိုနဲ့ ချော့တခါ ခြောက်တလှည့်နဲ့ နသားပါယား လုပ်တော့တယ်။
တောနွားကြီးတို့ အဖွဲ့လည်း ကျားဆိုးက မပြေးတဲ့အပြင် ဖွန်ကြောင်တာကိုပါ အဆစ်ခံနေရတယ်။ ငြင်းနေရင် ကျားဆိုးကြီး ရိပ်မိပြီး ကျားစာဖြစ်မှာ စိုးတာနဲ့ ကျားဆိုးကြီး ပြုသမျှကို သူတို့ငြိမ်ခံပေးနေရလေတော့သတည်း။
ကလေးတို့ရေ၊ အိမ်မှာ လူကြီးတွေမရှိတုန်း တယောက်ယောက်က
ကျားယောင်ဆောင်ဖို့ လာခေါ်ရင်တော့ မလိုက်သွားကြနဲ့နော်။
အသက် (၈၀) အရွယ် အဘိုးအိုတစ်ဦးသည် ဆိုဖါပေါ်တွင် ထိုင်နေသည်။ သူနှင့် မလှမ်းမကမ်း တွင် အသက် (၄၀) ခန့်အရွယ်ရှိသော သူ၏သားသည် စာရင်းဇယားများဖြင့် အလုပ် ရှုပ်နေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ပြတင်းပေါက်ပေါ်သို့ ကြက်ဖတစ်ကောင်လာနားလေသည်
`` ငါ့သား ဟိုပြတင်းပေါက်ဘောင် ပေါ်က ဘာလဲ´´
`` ကြက်ဖ လေ အဖေ ရဲ့´´
ခဏကြာသော် အဘိုးအိုသည် သူ့သားအားထပ်မေးပြန်သည်။
`` အဖေကလည်း အခုလေးပဲ ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ ၊ အဲဒါ ကြက်ဖ´´
အချိန်အနည်းငယ် ကြာသော အခါ အဘိုးအိုသည် ထိုမေးခွန်းကိုပင် တတိယအကြိမ်အဖြစ် သူ့သားအား ထပ်မေးပါသည်။
`` ပြတင်းပေါက်ပေါ် ကဘာ´´
ထိုအခေါက်တွင်မူ သူ့သား၏ဒေါသ အချို့နှင့် အတူစိတ်မရှည်မှုတို့သည် မာကြောသောလေသံတွင် သိသိသာသာ ကြားရပါသည်။
`` အဲဒါ ကြက်ဖ၊ ကြက်ဖ´´
ခဏကြာသော် အဖေလုပ် သူသည် ထိုမေးခွန်းကိုပင် စတုတ္ထအကြိမ် သူ့သားအားမေးပါသည်။
``အဲဒါ ဘာလဲ´´ဟု ပြတင်းပေါက်ပေါ်သို့ လက်ငြိုးထိုးပြလေသည်။
ထိုအခေါက်တွင်မူ သားဖြစ်သူသည် ဒေါသအပြည့်ဖြင့်အော်ပါတော့သည်။
`` ဘာဖြစ်လို့ ဒီမေးခွန်းကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ မေးနေတာလဲ၊ အဲဒါ ကြက်ဖပါဆို ကျုပ်ဖြေနေတာ အကြိမ်မနည်းတော့ဘူး။ ဒီကြက်ဖဆိုတဲ့ စကားကိုတောင် အဖေ နားမလည်တော့ဘူးလား၊ ဟင် ´´
အဘိုးအိုသည် အဘိုးအိုသည် ဘာမျှပြန်မပြောတော့ဘဲ နှုတ်ဆိတ်သွားပါသည်။ ခဏကြာသော် အဘိုးအိုသည် သူ့အခန်းကို ထသွားပါသည်။ထို့နောက် ဒိုင်ယာယီစာအုပ် အဟောင်းတစ်အုပ်ယူပြီး ပြန်ထွက်လာပါသည်။ ထိုစာအုပ်သည် သူ့သားမွေးဖွားစဉ် ကတည်းက နေ့စဉ် ရေးမှတ်ကာ ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အဘိုးအိုသည် စာမျက်နှာတစ်ခုကိုလှမ်ကာ သူ့သားအားဖတ်ကြည့်စေပါသည်။
သားဖြစ်သူသည် ထိုစာမျက်နှာ ကိုဖတ်ကြည့်သောအခါ ဒိုင်ယာရီထဲတွင် ရေးသားထားသော အောက်ပါ စားများကိုတွေ့ရပါသည်။
ဒီနေ့သား အသက်(၃)နှစ်ပြည့်တယ်။ သားနဲ့အတူ ဆိုဖါ ပေါ်မှာ ထိုင်နေတုန်း ကြက်ဖတစ်ကောင် လာနားတယ်။ သားကအဲဒါ ဘာလဲလို့ (၂၃) ကြိမ်တောင်မေးတယ်။ အကြိမ်တိုင်းမှာ အဲဒါ ကြက်ဖလို့ ငါပြန်ဖြေတယ်။ သားလေးနားလည်အောင် အမျိုးမျိုး ရှင်းပြတယ်။ သိချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ထပ်ခါ ထပ်ခါမေးနေတဲ့သားဟာ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ ပြောပြလိုက်ရင် မျက်လုံးလေးအ၀ိုင်းသားနဲ့ နားထောင်လိုက်၊ ပြီးရင် တစ်ခေါက် ပြန်မေးလိုက်နဲ့ ငါ့မှာ သားကိုဖြေရတာ မောကို မမောနိုင်ဘူး။ ဘာမှမသိသေးတဲ့ ငါ့သားလေးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေရတာ အရမ်းပျော်ဖို့ ကောင်းသလို ထပ်ခါထပ်ခါ မေးနေတဲ့သား ကို ငါအကြိမ်ကြိမ် နမ်းရှိုက်မိတယ်။´´
ကလေးငယ်လေးက မေးခွန်းတစ်ခုကို (၂၃) ကြိမ်တိုင်အောင် မေးမြန်းခဲ့တုန်းက အဖေလုပ်သူက မမောနိုင်၊ မပန်းနိုင်၊ ဒေါသအလျဉ်းမရှိဘဲ ကြင်နာမှုအပြည့်နဲ့ ပြန်ဖြေခဲ့မေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ သားလုပ်တဲ့သူဟာ အဖေဖြစ်သူ အနေနဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုတည်းကို (၄) ကြိမ်လောက် မေးတာနဲ့ပဲ ဒေါသတွေ ဖြစ်၊ စိတ်မရှည်နိုင်ဖြစ်နေရပြီလေ။ ဘယ်လောက်များ ကွာခြားလိုက်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလဲ။
သင်တို့ရဲ့ မိဘတွေဟာ အခုအချိန်မှာ အိုမင်းလာနေပါလိမ့်မယ်၊သူတို့မှာ မျက်စိတွေမှုန်၊ နားတွေမကောင်း၊ မှတ်ဥာဏ်တွေလည်း အရင်လို ဘယ်ကောင်းနိုင်တော့မလဲ။ သူတို့အပေါ် စိတ်မရှည်မှု၊ ဒေါသဖြစ်မှု၊ ဂရုမစိုက်မှုတွေ ဘယ်တော့မှ မပေးပါနဲ့ ။ နူးညံ့ချိုသာတဲ့စကားလေတွေ၊ ကြင်နာတဲ့ အပြုအမူအပြောအဆို လေးတွေ နဲ့သူတို့ကို ဂရုစိုက်ပေးပါ။ သူတို့အတွက် အခုအချိန်မှာ တကယ်လိုအပ်တာက စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေ၊ ပကာသနတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သားသမီး၊မြေးမြစ်တွေရဲ့ သူတို့အပေါ် ဂရုစိုက်မှု၊ကြင်နာမှု၊ ယုယမှု၊ အားပေးမှုတွေပါ။
ဒီနေ့ကစပြီး ဒီစာပိုဒ်လေးကို ကျယ်ကျယ်လေး အော်လိုက်စမ်းပါ။ ``ငါ့မိဘတွေ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နေတာကို ငါအလိုရှိတယ်၊ မြင်ချင်တယ်။ သူတို့တစ်တွေဟာ ငါ့ကို ငယ်စဉ်ကလေး ဘ၀ကတည်းက ဂရုစိုက် ကျွေးမွေး သုတ်သင်လာခဲ့ကြတယ်။ သင်ကြားခဲ့ကြတယ်။ ငါဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့အတွက် သူတို့တွေဟာ မုန်တိုင်းတွေ၊ မီးတောက်တွေကို အံတုပြီး ဘ၀ရဲ့ ဆိုးရွား လှတဲ့ တောင်တန်းတွေ၊ တောင်ကြားတွေမှာ ငါ့ကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီး ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီနေ့ ငါဆိုတဲ့လူဟာ သူတို့တွေ မရှိဘဲနဲ့ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။´´
``ယနေ့မှစပြီး ကျွန်ုပ်၏ မိဘများကို အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံကျေးဇူးဆပ်ပါမည်။
ချိုသာသော၊နူးးညံ့သော၊ အကြင်နာပါသော စကားများဖြင့်သာ သူတို့ကို ပြောဆိုဆက်ဆံပါမည်။ သူတို့တွေ ဘာပြောပြော ဘာတွေလုပ်လုပ်ပေါ့။ ကျွန်ုပ်၏ မိဘများကို ကျွန်ုပ်ချစ်ပါသည်။´´
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံး မိဘကျေးဇူး အထူးသိတတ်သော သားသမီး လိမ္မာလေးများ ဖြစ်ကြပါစေဟု……..
Posted by Unknown | at 12:44 PM |0comments
မြန်မာဘလောက်ဂါများ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်၊ စာလုံးပြောင်းပရ...